News | Tag: beer
एक वियरको मूल्य ८० लाख !
एजेन्सी । म्यान्चेस्टरको एक होटलमा अष्ट्रेलियाका पत्रकारको १ वियरको लागि ८० लाख रुपैयाको बिल आएको हो ।
वियरको सुरक्षाको लागि पनि कण्डम
अष्ट्रेलियाका दुई कम्पनीको कमाल, अन्तरिक्षमा पनि बियर लैजाने प्रयास
एजेन्सी । हालसम्म भनिन्थ्यो कि रक्सी पिउने मानिस आकाशमा उडेजस्तो महसुस गर्छन् वा स्वर्गानुभुत गर्छन् । तर, एक मिडिया रिपोर्टका अनुसार अब छिट्टै नै बीयरलाई
बीयरलाई अन्तरिक्षमा लैजाने तयारी !
हालसम्म भनिन्थ्यो कि रक्सी पिउने मानिस आकाशमा उडेजस्तो महसुस गर्छन् वा स्वर्गानुभुत गर्छन् । तर, एक मिडिया रिपोर्टका अनुसार अब छिट्टै नै बीयरलाई अन्तरिक्षमा लैजाने तयारी भएको छ ।